Ifektri Yeshaja yefoni eyenziwe ngokwezifiso ye-Android, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Ishaja yefoni ye-Android
Ikhwalithi ephezulu engu-100% nokusebenza kahle okuphezulu kokushaja. Ingashaja ifoni yakho ngokushesha futhi yonge isikhathi!
Isitifiketi sekhwalithi nokuvikelwa okuningi: kuqinisekisa ukuvikelwa okugcwele, kufaka phakathi i-overvoltage, i-undervoltage, i-overheat, i-overcurrent kanye ne-short circuit.
Izingcingo ze-PChargers namathebulethi wabo bonke osayizi: bamadivayisi we-elekthronikhi namamodeli
1. Amapharamitha weshaja yefoni ye-Android:
Amandla eshaja ibhodi lesifunda
Output 18W, DC 5V, 3A/9V,2A/12,15A; I-USB 2.0 QC3.018 W, DC5V, 3 A / 9 v, 2 A / 12 v, 1.5 A
Can yiba yi-OEM
Faka u-110 ~ 240 v 50/60 hz
I-1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo.
Imikhiqizo emihle, insizakalo engcono
Iminyaka emibili iwaranti enesinxephezelo emihlanu ngenkinga yethu
Eyodwa ukuhleleka, nokusekelwa kokuhlola
Hola inqubo yamahhala
Ibhodi lesifunda ligcwele ibhokisi elenziwe ngokwezifiso, ama-anti-collision kanye ne-shockproof, kanye ne-PE bag-proof package.
3) Uma ungazi umkhiqizo, sicela uye egumbini lethu lokubonisa ukuze ubone isampula, qinisekisa noku-oda, ikhwalithi ilungile uku-oda, ukulethwa uma kukhona ifayela le- umehluko phakathi komkhiqizo nesampula ungasekela ukubuya ne- ukushintshaniswa, ikhwalithi isuselwa kusampula!
Nikeza amakhasimende isisombululo esihle kakhulu senani lentengo yokusebenza kwezentengiso, ulandelele ngenkuthalo ukusayina inkontileka, ukulethwa kwempahla nokusiza amakhasimende ukuxazulula ubunzima.
Amathegi ashisayo: Ishaja yefoni ye-Android, eyenziwe ngokwezifiso, iFektri, Abenzi nabahlinzeki